emakhoneni Okuvikelwe, amabhishi zinkulu, ilanga, ukuphumula iholidi ehlobo - konke lokhu ubukhazikhazi awukona ngempela ukuya kude, Russia amumethe bemvelo izindawo emangalisayo sokuzilibazisa. Namuhla sigxila ukuzilibazisa, Primorye, "Sidimi". Lolu hlelo lubandakanya ukuhlala phezu kwezihlabathi yegolide ebhishi, ukushaywa umoya kuyathakazelisa ezikhangayo zendawo. Kodwa akugcini lapho. Egypt, Turkey nezinye zokungcebeleka untwisted musa nginikela okweshumi kukho labo nakho ukuthi ungathola lapha. Nezokungcebeleka isikhungo (Primorye) "Sidimi" - liphinde izintaba emhlabeni best izindawo ezinhle kakhulu agodliwe, ngihlezi komlilo. Futhi manje ake sixoxe ngalokhu ukuzilibazisa kancane xaxa.
Esikhathini Khasan esifundeni Primorye Territory has Bezverkhova emzaneni. Kulapha ukuthi headlands Turek futhi Brynner. Cishe ngokushesha ngemva kokuba kubo efudumele futhi engajulile bay Huck, futhi uye waba indawo engcono kunazo zonke lonke ugu. ukuzilibazisa Lapha based (Primorye) "Sidimi".
Ukuze indawo izivakashi baningi izindlu zangasese kanye Cottages zokudlala. Isizini lolwandle sinqamukile emangalisa inflatable amanzi ipaki. Ukuze amanzi ezemidlalo abathanda kukhona isikebhe futhi isikebhe eziqashisayo, kayaks, catamarans, surfing futhi windsurfing. Njengoba ubona, lonke agcwele lezimanga, ngakho uma uhlala onqenqemeni kude empumalanga, khona-ke kumelwe uvakashele "Sidimi" (ukuzilibazisa isikhungo, Primorye). Kanjani ukuze uthole base, sizobe ukuthi njengamanje.
Indlela elula hit umgwaqo ngemoto yakho siqu. Nezokungcebeleka isikhungo (Primorye) "Sidimi" imayelana ihora kude nomuzi ka-Vladivostok. On umzila Vladivostok - eKhabarovsk udinga ukulandela ngaphambi kokubhekisa Razdolnoe, bese eduze komgwaqo omkhulu, uyoba ukushayela mayelana 100 km.
Nokho, kungcono kakhulu ukusebenzisa emfuleni ezokuthutha, uma ufuna ukungena kwimboni "Sidimi" (ukuzilibazisa isikhungo, Primorye). Kanjani lapho, sizobe ukukutshela. Kusukela pier nsuku isuka Shuttle isikebhe li-iri nemizuzu engamashumi amane, thatha wena izindawo. On pier uzothola ibhasi inkampani edingekayo ukuze izinto endlini. Kuyinto elula kakhulu ukuze uthole lapha isikebhe sakho siqu, yacht noma isikebhe.
Mhlawumbe ukunakwa enkulu ikhokhelwa izivakashi, ukuthi bazohlalaphi ngamaholide. Othile afunda ukuzibekezelela kakhudlwana ingaphakathi Okuqukethwe akuzwakali, enye ebalulekile yonke imininingwane. Ngakho-ke kubalulekile ukuba baqoqe kusengaphambili ukuze singathwesi udumazeke.
Ukuze izivakashi kukhona isakhiwo brick esinezitezi ezintathu. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, lesi akusona isigaba sehhotela "okunethezeka", kodwa nokho, lapha ngempela kahle.
Ubude has a "ejwayelekile" 16 izinhlobo amakamelo. Izindleko abahlala nabo ruble 2450 noma 2950, kuye ngokuthi ezingeni induduzo. Phakathi labo abeza uphumule "Sidimi" (Primorye ukuzilibazisa isikhungo), iningi izivakashi uthanda amakamero la makhulu. Ziyakwazi: yokugezela, amanzi ashisayo, air conditioning, ifenisha kunesidingo.
kukhona izigaba eziyisikhombisa ngokuthi "isihlahla sikaKhisimusi" abathandi wenduduzo okusezingeni eliphezulu. Lapha, izivakashi uphiwa, amakamelo amakhulu quadruple nge yokugezela ukhululekile futhi eshaweni, air conditioning, ifenisha kanye izinto zasendlini, kanye ithala ezimboziwe, lapho kukhona ngakho okuhle ukuphuza itiye kusihlwa. Izindleko yalezi amakamelo - ruble 4450. ngosuku.
Ekugcineni, ensimini ka Herringbone + "amakamelo a izakhiwo ezinhlanu 'lapha ifenisha yesimanje. Igumbi amazinga - ruble 5450. ngosuku. I choice omuhle sokuzilibazisa inkampani enkulu futhi enobungane "Sidimi". Nezokungcebeleka isikhungo (Primorye) ibekwe kahle ngawe ukuba uthole iholide.
Ngaphansi kwesithombe senqaba ngeke uthole nesithukuthezi. Ezinganeni kukhona umbukwane inflatable amanzi ipaki, lapho bayajabula frolic. Ngaphezu kwalokho, kukhona uyabelana nobani lolwandle zezingane. Futhi yena nabanye ivikelwe buoys kanye some nge amanetha ekhethekile insimu ukubhukuda abakhileyo ahlukahlukene ulwandle. Nokho, lolwandle yezingane lincane futhi ukufudumala.
Izivakashi lapha anemisila zemidlalo ehlukahlukene, lena volleyball ne-basketball, ibhola lomphebezo, kanye ejimini ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, kukhona ikhefi-yokudlela, ithenisi enkantolo, futhi Gazebo nge izoso esakhelwe ngaphakathi. Sine elikhulu umusi okugeza abathandi.
Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, ngisho noma ungayi kuyiwe futhi izintaba ensimini iningi base ukuzijabulisa ngokwanele.
Lona isici esikhanga kakhulu nge kulabo ukuba "Sidimi" woza. Nezokungcebeleka isikhungo (Primorye), ukubuyekezwa abizwa ngokuthi njengoba option best for ehlobo amaholide ku insimu yonke esifundeni Far Eastern, ekubeni kukhethwa iningi zabantu baseRussia. Kukhona cishe njalo kucacile futhi libalele, izinga lokushisa sekuqala ukufudumala kuze kufinyelele 29, namanzi - kuze kube degrees 23. Kuyinto lokushisa kunina nobabili abadala kanye nezingane. Beach lapha limnandi kakhulu, sandy, mayelana 500 amamitha. Ububanzi ebhishi - mayelana 40 amamitha. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, ihlanzekile kakhulu, ukuhlanza ebhishi nsuku zonke. Ayikho ulwelwe ogwini has ezintathu yokumba wokutakula kanye isikhungo sezokwelapha.
Lona omunye iphuzu okuyinto ebaluleke kakhulu izivakashi kakhulu. Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa eminingi, ukudla lapha impela ezingabizi futhi izinga okusezingeni eliphezulu, kodwa ngaphandle frills. Ngakolunye uhlangothi, umsebenzi ekamelweni lokudlela - ukunikeza holidaymakers yesidlo ashisayo. Futhi ukuze ukuzitika on into ekhethekile, kukhona uchungechunge zokudla, lowo oyinhloko uwukwenza Esitezi kwesakhiwo isitini ezintathu storey. Ngaphezu kwalokho, phakathi nemikhankaso uzoyeka e eateries eziningi.
Kufinyeta nekuhlatiya ukubuyekezwa, singasho ngokuqiniseka ukuthi zonke Russian kufanele uvakashele "Sidimi" (ukuzilibazisa isikhungo, Primorye). Izithombe ezithathwe lapha, ziyojabula nge yobuhle balo nokuhlala kwagxila kubo ezihlukahlukene zokuzijabulisa.
Ngesisekelo hhayi kuphela ukuthamela ilanga zibhukude, kodwa futhi ukuba anqobe skaladrom, ukugibela isikebhe ngomkhumbi, uhamba ngebhayisikili isikwele kanye ngebhayisikili, ngomkhumbi futhi bashaywe umoya opholile.
Ikakhulukazi izivakashi bayahlonishwa amanzi ehlanzeke kunazo zonke bay. Lokhu kuchazwe kalula: akukho emifuleni eseduze, ngokuletha amanzi anodaka olwandle. Kulokhu, ukujula amancane abasondelana ngayo bay iyenza kahle efudumele. Izindaba ezimnandi kulabo unezingane ezincane, ngenxa yokuthi awayona ukulungele ukuphuma emanzini izinsuku.
Lena indawo ihlanzekile imvelo, lapho kukhona izinqolobane eziningana nemvelo futhi inani elikhulu izikhumbuzo kwamasiko. Ngakho-ke, ngaphandle izindawo ezisohlwini, kukhona nethuba ezamasiko kanye Kuzonyuka ezithakazelisayo emangalisayo. Kungani kuphela eyodwa umsedari reserve nge air yayo ongenakuqhathaniswa eqabulayo!
Ezimpahleni ezingasuki phansi zihlanganisa ... Accounting, amortization, bhala-nezinkinga fixed assets okungu
Inkulumo iziyaluyalu. Ukwahlukanisa izici eziyinhloko
I-Herpes ngemuva: izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela
Amakhibhodi Lock aphathekayo namakhompyutha edeskithophu